Ukufakelwa kwe-Induction, ukutshisa okutshisa, ukufudumala ukwenziwa kwonyango
Ikhaya / izicelo / Ukukhutshwa kweeNkcazo / Ukwenziwa komgangatho
Udidi: Ukukhutshwa kweeNkcazo tags: ku qulunqa, ukwenza i-induction eshushu, ukwenza induction, ukuqulunqwa kokuqulunqwa, izixhobo zokwenziwa, ukuqulunqwa kwesithando somlilo, umatshini wokuqhelanisa, Inkqubo yokumila, Ukwenza kushushu kushushu
Induction UKWENZA NOKUSHUMAYELA okuShushu I-teknoloji yindlela yokwenza iiplastiki zonakalise isinyithi ezifezekisiwe ngokukhenkceza kwisitya esinye sensimbi ukuqulunqwa nokutyumba nokutshisa izixhobo zokufudumala zokufakelwa kwefuthe. Iinkqubo zokubumba kunye nezitshisi ezitshisayo ziquka ukugoba okanye ukufaka i-billet yesinyithi okanye ukuqhakaza emva kokutshitshiswa kwiqondo lokushisa apho ukuchasana nokunyanzeliswa komzimba kubuthathaka. Iibhloko zezinto ezingezona zixhobo zingasetyenziselwa.Izicwangciso zokuqulunqa izisombululo zifakwe kumazwe amaninzi, ikakhulukazi kwicandelo lensimbi kunye nesiseko. Imizekelo yezixhobo ongazenzayo kunye nokufakelwa kokutshintshwa kunye nokutshisa okutshisayo yi-aluminium, ubhedu, ubhedu, isinyithi yentsimbi kunye nentsimbi engenasici.
Ukushisa okutshisayo okutshisayo kwezixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zezi:
• Insimbi 1200º C • I-Brass 750º C • I-aluminium 550º C
Izicelo ezipheleleyo zokufakelwa / zokutshisa iiHlathi
inkqubo yokwenza ifom yokutshisa
Amashishini okufudumeza ukushisa asetyenziswa ngokutsha ukutshisa iibhentshini zensimbi, imivalo, iibhloko zethusi kunye neebhloko ze-titanium ukuya kubushushu obufanelekileyo bokubumba nokutshisa.
Iphelisa ukuCwangcisa / Izicelo zokuFometha
Ukufudumala okutshatyalaliswayo kusetyenziselwa ukutshisa izinto ezifana nemigodi yamapayipi, iziphelo ze-axle, amacandelo ezithuthi, kunye ne-bar iphela ekuqulunqeni kunye nokwakhiwa kweenkqubo.
I-Induction Ukufakela / UkuThuthuka kwamaHlomelo okuHla
Xa kuthelekiswa namaziko asesidlangalaleni, i-Impuction Forging Furnace inikeza inkqubo ebalulekileyo kunye neenzuzo eziphezulu:
1. Ixesha elifudumayo lokufudumala, ukunciphisa ukunyuka kunye ne-oxidation
2. Ulawulo lokushisa lokushisa olulula kwaye oluchanileyo. Iziqendu kumashishini angaphandle kweenkcukacha zingabonwa kwaye zisuswe
3. Akukho xesha elilahlekileyo elinde isithando somlilo ukuba siphakamise ukushisa okufunekayo
4. Izitshini zokufudumala zokutyhubela iimveliso zifuna abasebenzi abancinci
5. Ukushisa kunokubhekiswa kwinqanaba elithile, elibaluleke kakhulu kwiindawo ezinommandla owodwa.
6. Ukusebenza okukhulu kwe-thermal - ubushushu buveliswa kwinxalenye ngokwayo kwaye akufuneki bushushu kwigumbi elikhulu.
7. Iimeko ezibhetele zokusebenza. Ukushisa okukhoyo kuphela emoyeni yiyo yezona zodwa. Imiqathango yokusebenza iyamnandi kakhulu kunokuba isithando somlilo.